सर्वश्रेष्ठ टेस्टोस्टेरोन (परीक्षण) पाउडर निर्माता कारखाना
AASraw ले स्थिर आपूर्तिको साथ टेस्टोस्टेरोन एस्टर पाउडरको प्रकार प्रदान गर्दछ, हामी एनाबोलिक स्टेरोइड कच्चा विश्वभर पठाउन सक्छौं, विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपको लागि, रिमेल सेवाले राम्रोसँग काम गर्दछ र यो घरेलु डेलिभरीको प्रकार हो, धेरै सुरक्षित। थप रूपमा, बल्क अर्डर सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यको साथ समर्थन गर्न सकिन्छ।
अब AASraw सँग कुरा गर्नुहोस्
टेस्टोस्टेरोन पाउडर किन्नुहोस्
एक छिटो उद्धरण को लागी सोध्नुहोस्
टेस्टोस्टेरोन Undec पाउडर (5949-44-0)-COA
टेस्टोस्टेरोन पीपी पाउडर (1255-49-8)-COA
टेस्ट प्रोप पाउडर (57-85-2)-COA
टेस्ट ई पाउडर (315-37-7)-COA
टेस्ट डेका पाउडर (5721-91-5)-COA
टेस्ट साइप पाउडर (58-20-8)-COA
Sus 250 पाउडर-COA
परीक्षण Iso पाउडर (15262-86-9)-COA
1. टेस्टोस्टेरोन र शरीर निर्माण इतिहास
2. टेस्टोस्टेरोन के हो र यो कसरी उत्पादन गरिन्छ?
3. स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन स्तरहरू के हो?
4. के स्टेरोइड र टेस्टोस्टेरोन एउटै कुरा हो?
5. कसलाई टेस्टोस्टेरोन उपचार चाहिन्छ?
6. किन बॉडीबिल्डरहरूले टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शनहरू मन पराउँछन्?
7. इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोनको सबैभन्दा सामान्य एस्टरहरू के हुन्?
8. शरीर सौष्ठवको लागि उत्तम टेस्टोस्टेरोन एस्टर कसरी प्राप्त गर्ने?
शरीर निर्माणमा विभिन्न टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरूको भूमिका के हो?
टेस्टोस्टेरोन मानव शरीरमा प्राकृतिक रूपमा हुने स्टेरोइड हार्मोन हो। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष शरीरको शारीरिक विकासको लागि आवश्यक छ र धेरै अन्य प्रकार्यहरू छन्, जसको परिणाम बडीबिल्डरहरू र एथलीटहरू द्वारा एनाबोलिक स्टेरोइडको रूपमा प्रयोग भएको छ।
(३ ४ ५) ↗
टेस्टोस्टेरोन मानव शरीरमा स्टेरोइड हर्मोन हो र उमेर बढ्दै जाँदा शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको स्तर घट्न थाल्छ। यो गिरावट धेरै साइड इफेक्टहरु संग छ, जस्तै कपाल झर्ने, मांसपेशी मास को हानि, र मानसिक र शारीरिक सहनशक्ति मा समग्र कमी। टेस्टोस्टेरोन स्टेरोइड हार्मोन शरीरमा यिनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ, र त्यो अनुभूतिले पहिलो स्थानमा टेस्टोस्टेरोन उपचारको रूपमा एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोनको प्रयोगको नेतृत्व गर्‍यो।
1899 मा, डा. ब्राउन-सेक्वार्डले पुरुषहरूको लागि जीवनको एलिक्सर विकास गरे जुन रगत, वीर्य र अण्डकोषको तरल पदार्थबाट बनेको थियो जुन कुकुर र गिनी सुँगुरहरूबाट लिइएको थियो। यो आजको चिकित्सा प्रगतिको प्रकाशमा अनौठो लाग्न सक्छ तर 1899 मा फिर्ता, यो एक महत्वपूर्ण खोज थियो। डा. ब्राउन-सेक्वार्डले आफ्नो समग्र स्वास्थ्य र सहनशक्तिमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखेर आफैंमा यो गल्ति परीक्षण गरे। पशु टेस्टोस्टेरोनमा आधारित अमृतको साथ डा. ब्राउन-सेक्वार्डको सफलताको वचन फैलिएसँगै, अधिक र अधिक चिकित्सकहरूले अमृत प्रयोग गर्न थाले। अन्ततः, यो 12,000 भन्दा बढी चिकित्सकहरु द्वारा निर्धारित गरिएको थियो, यसैले, टेस्टोस्टेरोन प्रयोग को लागी मार्ग प्रशस्त।
टेस्टोस्टेरोन स्टेरोइड हर्मोनको प्रभावको कारणले गर्दा डा. ब्राउन-सेक्वार्डको कन्कोक्शन सफल भएको थियो, तर वास्तविक सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन सन् १९३५ सम्म जर्मनीमा विकसित भएको थिएन। यस सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोनको मुख्य प्रयोग डिप्रेसनको उपचार गर्न थियो र यो 1935 ओलम्पिक सम्मको लागि प्रयोग गरिएको थियो। दुरुपयोगको लागि मुख्य प्रेरणा थाहा छैन तर यो 1954 ओलम्पिकमा थियो कि एथलीटहरूले टेस्टोस्टेरोनलाई एनाबोलिक स्टेरोइडको रूपमा दुरुपयोग गर्न थाले, राम्रो शारीरिक प्रदर्शनको लागि।
यद्यपि सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोनको दुरुपयोग 1954 मा सुरु भयो, यो 1980 सम्म एथलीटहरूमा सीमित थियो जब टेस्टोस्टेरोनलाई एनाबोलिक स्टेरोइडको रूपमा प्रयोग सामान्य जनसंख्यामा पनि फैलियो। यस समयमा, र हाल सम्म, टेस्टोस्टेरोनको प्रयोग मुख्यतया पुरुष गैर-एथलीटहरूले उनीहरूको शारीरिक प्रदर्शनको सट्टा उनीहरूको उपस्थितिको लागि थियो। सामान्य जनसंख्याले आफ्नो मांसपेशी मास सुधार गर्न टेस्टोस्टेरोन वा स्टेरोइड प्रयोग गर्दछ, र खेलकुदमा राम्रो प्रदर्शन गर्न भन्दा ठूलो र ठूलो देखिन्छ।
सामान्य जनसंख्याले एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोनको साथ आफ्नो शारीरिक प्रदर्शनमा उल्लेखनीय सुधार देखे। तिनीहरूले सुधारिएको दुबला मांसपेशी मासको अनुभव गरे, कसरत पछिको मांसपेशी दुखाइमा कमी र समग्र सुधारिएको रिकभरी अवधिको साथ। यी सबै फाइदाहरूले एथलीटहरू र बडीबिल्डरहरूद्वारा एनाबोलिक स्टेरोइडको रूपमा टेस्टोस्टेरोनको बढ्दो प्रयोगको नेतृत्व गर्‍यो।
एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोनको बढ्दो प्रयोगको परिणामस्वरूप कांग्रेसले 1990 को एनाबोलिक स्टेरोइड ऐन प्रकाशित गर्‍यो जसले एनाबोलिक स्टेरोइडहरूलाई उनीहरूको आफ्नै औषधि वर्गको रूपमा पहिचान गर्‍यो र तिनीहरूलाई नियन्त्रित पदार्थहरूको सूचीमा समावेश गर्‍यो।
टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरोइड हर्मोन हो जुन पुरुष र महिला दुबैमा पाइन्छ, महिलाको सट्टा पुरुषमा उच्च स्तरको साथ। यो एक पुरुष यौन हार्मोन हो जुन पुरुष यौन विशेषताहरु को विकास को लागी जिम्मेवार छ। मुख्यतया अण्डकोषमा उत्पादन हुने यो स्टेरोइड हर्मोन कोलेस्ट्रोलबाट संश्लेषित हुन्छ। मुख्य टेस्टोस्टेरोन को स्रोत पुरुष र महिलाहरूमा फरक हुन्छ किनकि महिलाहरू प्रायः टेस्टोस्टेरोन संश्लेषणको लागि एड्रेनल ग्रंथिहरू र परिधीय तन्तुहरूमा निर्भर हुन्छन् जबकि यो मुख्य रूपमा पुरुषहरूमा अण्डकोषद्वारा संश्लेषित हुन्छ।
टेस्टोस्टेरोनको संश्लेषण, एन्ड्रोस्टेन समूहको स्टेरोइड, कोलेस्ट्रोल र अण्डकोषमा लेडिग कोशिकाहरूको गतिविधिमा निर्भर गर्दछ। एक पटक संश्लेषित भएपछि, यो सेक्स-हर्मोन-बाइंडिंग ग्लोब्युलिन (SHBG) द्वारा रगतमा लगाइन्छ र यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि, यसलाई यसको निष्क्रिय मेटाबोलाइटहरूमा टुक्राउन कलेजोमा सारिन्छ।
एक स्वस्थ औसत पुरुषको टेस्टोस्टेरोन स्तर 264 ng/dl देखि 916 ng/dl को दायरामा हुनुपर्छ। यो दायरा 19 देखि 39 वर्षको उमेर दायरामा गैर-मोटो पुरुषहरूमा मात्र लागू हुन्छ, र औसत टेस्टोस्टेरोन स्तर औसत 630 ng/dl मा हुन्छ। यस मध्ये, केवल 25 प्रतिशत वास्तवमा सक्रिय टेस्टोस्टेरोन हो र लगभग2प्रतिशत देखि3प्रतिशत नि: शुल्क टेस्टोस्टेरोन हो।
टेस्टोस्टेरोन परिमार्जित Vermeulen विधि प्रयोग गरेर मापन गरिन्छ, जहाँ केवल SHBG मा बाँधिएको टेस्टोस्टेरोन मापन गरिन्छ। यसले टेस्टोस्टेरोनलाई पनि मापन गर्दछ जुन रक्तप्रवाहमा अल्बुमिनसँग कमजोर रूपमा बाँधिएको छ तर यसले निःशुल्क टेस्टोस्टेरोनलाई मापन गर्दैन।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि टेस्टोस्टेरोन स्तरहरूको यो सन्दर्भ दायरा लामो समयदेखि चिकित्सकहरूद्वारा विवादित भएको छ, मुख्य गुनासो दायराको तल्लो छेउमा रहेको छ। चिकित्सकहरू विश्वास गर्छन् कि 294 ng/dl धेरै कम छ र सामान्य मान हुनुको सट्टा हाइपोगोनाडिज्म वा कम टेस्टोस्टेरोन स्तरलाई जनाउँछ। यसको सट्टा, तिनीहरूले सन्दर्भ दायरा थप सटीक बनाउन 350 ng/dl को कम कट-अफ मानको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गर्छन्। यद्यपि, यो एक व्यापक रूपमा स्वीकृत कट-अफ मान होइन र आधिकारिक कट-अफ अझै 294 ng/dl मा रहन्छ, यद्यपि केही निजी अस्पतालहरूले 350 ng/dl लाई आफ्नो कट-अफ मान्न सक्छन्।
टेस्टोस्टेरोन स्तरहरू जाँच गर्न विचार गर्ने अर्को पक्ष भनेको स्टेरोइड हर्मोन दिनभरि उतारचढावबाट गुज्रिरहेको छ, यसको मतलब यो धेरै सम्भव छ कि बिहान मापन गरिएको मानहरू साँझमा मापन गरिएका मानहरू भन्दा धेरै फरक हुने सम्भावना छ। दिनभरि टेस्टोस्टेरोनको स्तर घट्ने भएकाले बिहानको मान धेरै उच्च हुन्छ।
टेस्टोस्टेरोन स्तरहरू गोनाडोट्रोपिन-रिलीजिङ हार्मोन (GnRH) को रिलीजमा पनि निर्भर छन् जुन आफैं तालबद्ध रूपमा, औसतमा, प्रत्येक दुई घण्टामा रिलीज हुन्छ। यो दिन भर टेस्टोस्टेरोन स्तर मा उतार-चढ़ाव संग श्रेय गर्न सकिन्छ।
टेस्टोस्टेरोन र स्टेरोइडहरू एउटै कुरा होइनन्, यद्यपि तिनीहरूसँग एउटै क्षमताहरू छन्, एक हदसम्म। टेस्टोस्टेरोनसँग तुलना गर्नु अघि एनाबोलिक स्टेरोइडहरू के हुन् भनेर पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण छ।
एनाबोलिक-एन्ड्रोजेनिक स्टेरोइडहरू प्राकृतिक सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन जस्तै प्रभाव पार्ने विभिन्न घटकहरू हुन्। वास्तवमा, तिनीहरू टेस्टोस्टेरोनको सिंथेटिक रूपहरू हुन्। एनाबोलिक स्टेरोइडहरू या त टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरू, टेस्टोस्टेरोन पूर्ववर्तीहरू, वा टेस्टोस्टेरोनको अन्य रूपहरू हुन सक्छन्, तिनीहरू सबै प्राकृतिक हर्मोन जस्तै कार्य गर्दछ।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि एनाबोलिक स्टेरोइडहरू कोर्टिकोस्टेरोइडहरू भन्दा फरक छन् जस्तै prednisone जुन निश्चित चिकित्सा विकारहरूको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। एनाबोलिक स्टेरोइडहरू प्रायः कम टेस्टोस्टेरोनका लागि चिकित्सकहरूद्वारा निर्धारित गरिन्छ, किनकि तिनीहरू समान रूपमा कार्य गर्छन्। यद्यपि, यी प्रकारका स्टेरोइडहरू पनि सामान्यतया दुरुपयोग र दुरुपयोग एथलीटहरू र बडीबिल्डरहरूले मांसपेशीको मासलाई द्रुत रूपमा बढाउनको लागि प्रयोग गर्छन्।
एनाबोलिक स्टेरोइड मस्तिष्कमा एन्ड्रोजन रिसेप्टरसँग बाँधिन्छ। टेस्टोस्टेरोनले यस रिसेप्टरलाई सामान्यतया यसको प्रभावहरू उत्पादन गर्नको लागि बाँध्छ, यसैले, टेस्टोस्टेरोन जस्तै कार्य गर्ने एनाबोलिक स्टेरोइडहरूको क्षमताको व्याख्या गर्दै। एनाबोलिक स्टेरोइडहरू इंजेक्शनहरू, चक्कीहरू, प्रत्यारोपित गोलीहरू, जेलहरू, र क्रीमहरू जस्ता विस्तृत रूपमा उपलब्ध छन्। त्यसै गरी, त्यहाँ धेरै प्रकारका एनाबोलिक स्टेरोइडहरू छन्, ती सबै कम टेस्टोस्टेरोन स्तरसँग सम्बन्धित चिकित्सा विकारहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष सेक्स हार्मोन हो जुन शरीरमा प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुन्छ। टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरू, जुन या त प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन वा सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोनको एस्टर हुन् कम टेस्टोस्टेरोन स्तरहरूको उपचारको लागि प्रायः प्रयोग हुने एनाबोलिक स्टेरोइडहरू हुन्। टेस्टोस्टेरोन एस्टरका उदाहरणहरूमा टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट, टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट, टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, टेस्टोस्टेरोन सस्टानन 250, टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियोनेट, टेस्टोस्टेरोन डेकानोएट, टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट, र टेस्टोस्टेरोन अन्डकानोएट समावेश छन्।
एनाबोलिक स्टेरोइडको रूपमा टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरूको व्यापक प्रयोगको पछाडिको कारण यो हो कि एस्टेरिफिकेशन प्रक्रियाले वास्तविक हर्मोन वा सिंथेटिक हर्मोन मेटाबोलिज्म-प्रतिरोधी बनाएर एनाबोलिक स्टेरोइडलाई धेरै जैव उपलब्ध बनाउँछ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यी एनाबोलिक स्टेरोइड एस्टरहरू प्रोहोर्मोन वा प्रो स्टेरोइड संस्करणहरू हुन्छन्, जुन शरीरमा सक्रिय हुन आवश्यक छ।
एनाबोलिक स्टेरोइड एस्टरहरू इन्ट्रामस्कुलर इन्जेक्सनहरू मार्फत दिइने भएकोले, स्टेरोइड डेलिभरीको यस फारमबाट हुने फाइदाहरू नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ। टेस्टोस्टेरोन एस्टर उन्मूलन सुस्त हुन्छ किनकि एस्टरहरूको अवशोषण पनि ढिलो हुन्छ। यसले टेस्टोस्टेरोन एस्टरको छोटो आधा-जीवनको मुद्दालाई लड्न मद्दत गर्दछ। यी एस्टरहरू हार्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी र कम टेस्टोस्टेरोन स्तरहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले यो लामो आधा-जीवन हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
उमेर बढ्दै जाँदा टेस्टोस्टेरोनको स्तर घट्न थाल्छ। यो पुरुषहरूको लागि बढ्दो उमेरको सामान्य भाग हो, त्यहाँ 1 वर्षको उमेर पछि टेस्टोस्टेरोन स्तरमा प्रति वर्ष 30 प्रतिशत गिरावट हुन्छ। यस उमेरभन्दा माथिका जो कोहीले पनि टेस्टोस्टेरोन एस्टर इन्जेक्सनहरू प्रयोग गरेर मांसपेशी मास, मांसपेशीको वृद्धि, कामवासना, र सामान्य मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गर्नेहरूसँग टेस्टोस्टेरोन उपचारबाट फाइदा लिन सक्छन्।
टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शनहरू धेरै फाइदाहरू छन् तर यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यस विषयमा छलफल गर्दा, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शनहरूले टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरूको इंजेक्शनलाई सन्दर्भ गर्दछ। यी इंजेक्शनहरू प्रत्येक दुई देखि चार हप्तामा एक पटक मात्र लिनु आवश्यक छ, यसले बडीबिल्डरहरू र एथलीटहरूलाई टेस्टोस्टेरोन उपचारको पालना गर्न सजिलो बनाउँछ। इंजेक्शनहरू बीचको यो लामो ब्रेक इन्ट्रामस्कुलर इंजेक्शनहरूले रक्तप्रवाहमा टेस्टोस्टेरोन एस्टरको अवशोषणलाई ढिलो पार्छ भन्ने तथ्यको कारणले सम्भव छ। यसबाहेक, एस्टेरिफिकेशन प्रक्रियाले सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन चयापचय प्रतिरोधी बनाउँछ, यसको मतलब यो बिस्तारै जारी हुनेछ र शरीर द्वारा प्रयोग गरिनेछ। यी सबैले सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोनको लामो आधा-जीवन र ढिलो उन्मूलनमा परिणाम दिन्छ।
सामान्यतया, बडीबिल्डरहरू र एथलीटहरूले टेस्टोस्टेरोन इन्जेक्सनलाई प्राथमिकता दिन्छन् किनभने हार्मोनका धेरै फाइदाहरू छन् जुन तल विस्तृत गरिएको छ:
(1) मांसपेशी वृद्धि
टेस्टोस्टेरोनले एनाबोलिक स्टेरोइडको रूपमा कार्य गर्दछ, जसको अर्थ मांसपेशी निर्माण हो। तसर्थ, टेस्टोस्टेरोन इन्जेक्सनहरू एथलीटहरू र बडीबिल्डरहरूद्वारा मांसपेशी वृद्धि र सुधार गर्ने क्षमताको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। टेस्टोस्टेरोनले सामान्यतया एस्ट्रोजेन वा डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोनमा रूपान्तरण गरेर यसको विभिन्न कार्यहरू गर्दछ, जुन हार्मोनको धेरै शक्तिशाली रूप हो। यद्यपि, बडीबिल्डरहरूले खोज्ने फाइदाहरू मांसपेशी र बोसोमा टेस्टोस्टेरोनको प्रत्यक्ष कार्यको परिणाम हो।
टेस्टोस्टेरोनले स्याटेलाइट कोशिकाहरू भनेर चिनिने मांसपेशी पूर्ववर्ती कोशिकाहरूलाई सक्रिय हुनको लागि उत्तेजित गर्छ र त्यसपछि या त मांसपेशी फाइबरहरूमा समाहित हुन्छ मांसपेशीको आकार बढाउन वा नयाँ मांसपेशी फाइबरहरू जम्मा गर्न र गठन गर्न। कुनै पनि विधि पछ्याइएको भएता पनि, टेस्टोस्टेरोन उत्तेजनाको अन्तिम परिणाम मांसपेशी मास बढेको छ। यो एथलीटहरू र बडीबिल्डरहरूले टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शनहरू प्रयोग गर्न रुचाउने मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो।
टेस्टोस्टेरोनले मांसपेशी फाइबरमा न्यूक्लीको संख्या बढाएर मांसपेशी फाइबरमा एन्ड्रोजन रिसेप्टरहरूको संख्या पनि बढाउँछ। यो विशेष गरी उपयोगी हुन्छ जब बडीबिल्डरहरू तालिम दिन्छन्, किनकि प्रशिक्षणले एन्ड्रोजन रिसेप्टरहरूको संवेदनशीलता सुधार गर्छ। टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरूमा संवेदनशील रिसेप्टरहरूको बढ्दो संख्याको साथ, टेस्टोस्टेरोनलाई मांसपेशी फाइबरमा बाँध्न र मांसपेशी-बढाउने कार्य गर्न सजिलो हुन्छ।
टेस्टोस्टेरोनलाई एनाबोलिक स्टेरोइडको रूपमा व्यापक रूपमा चिनिन्छ तर यो एक एन्टि-क्याटाबोलिक स्टेरोइड पनि हो जसको मूल अर्थ हो कि यसले मांसपेशी निर्माणलाई मात्र उत्तेजित गर्दैन, तर यसले शरीरमा क्याटाबोलिक हर्मोनहरूको गतिविधिलाई रोकेर मांसपेशी बिच्छेदन पनि रोक्छ। यसले बडीबिल्डरहरूमा मांसपेशी वृद्धिलाई बढावा दिन्छ।
(2) सुधारिएको सहनशीलता
टेस्टोस्टेरोनसँग शरीरमा एरिथ्रोपोइटिनको गतिविधिलाई उत्तेजित गरेर रक्त प्रवाह सुधार गर्ने क्षमता छ। यो हार्मोनले के गर्छ कि यसले रक्त कोशिका गठनलाई बढावा दिन्छ, विशेष गरी, रातो रक्त कोशिकाहरू। यो विशेष गरी एथलीटहरू र बडीबिल्डरहरूलाई प्रशिक्षणको लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि उनीहरूलाई कसरतको समयमा मांसपेशीको अक्सिजनको माग मिलाउन अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ। रातो रक्त कोशिकाहरूले रगतमा अक्सिजन बोक्ने र परिधीय मांसपेशीहरूमा पुर्‍याउने भएकाले, टेस्टोस्टेरोनको कारण रातो रक्त कोशिकाहरूमा भएको यो वृद्धि तिनीहरूका लागि धेरै लाभदायक हुन्छ।
बढ्दो अक्सिजन आपूर्तिले बढेको सहनशीलताको रूपमा कार्य गर्दछ किनभने यसले मांसपेशीहरूको प्रारम्भिक थकानलाई रोक्छ र प्रशिक्षण एथलीटहरूलाई लामो अवधिको लागि काम गर्न अनुमति दिन्छ।
(३) मांसपेशीको शक्ति बढ्छ
टेस्टोस्टेरोनले मांसपेशीको शक्ति बढाउने सबैभन्दा सरल तरिका भनेको मांसपेशीको आकार बढाउनु हो, जुन माथि छलफल गरिएको छ। यस संयन्त्रलाई कार्यको एकमात्र संयन्त्र मानिएको थियो टेस्टोस्टेरोन ईन्जेक्सन जसले मांसपेशीको शक्ति बढाएको छ तर चिकित्साको क्षेत्रमा हालैको प्रगतिहरूले पत्ता लगाएको छ कि क्याल्सियम स्तरहरूमा टेस्टोस्टेरोनको कार्यले मांसपेशिको बल पनि सुधारिएको छ।
मांसपेशी संकुचन, र यसैले, शक्ति कोशिका भित्र क्याल्सियम रिलीज मा निर्भर गर्दछ। टेस्टोस्टेरोनले यो क्याल्सियम रिलिज बढाउँछ, मांसपेशी संकुचन सुधार गर्न, र यसैले, मांसपेशी बल बढाउँछ। यो विशेष गरी व्यापक भारोत्तोलन कसरत संग शरीर निर्माणकर्ताहरु को लागी लाभदायक छ।
(4) परिष्कृत एथलेटिक प्रदर्शन
टेस्टोस्टेरोन, सामान्य दायराहरूमा, एथलेटिक प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष प्रभाव छैन, तर ओलम्पिक एथलीटहरूमा उच्च टेस्टोस्टेरोन स्तरहरू फेला परेको छ। पुरुष र महिला दुबैले शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको स्तर बढेकोले तीव्र रूपमा राम्रो गर्न पाइएको छ, यद्यपि संयन्त्र अझै स्पष्ट रूपमा थाहा छैन।
(५) शरीरको बोसो र तौलको संरचना कायम राख्नुहोस्
टेस्टोस्टेरोनले चयापचय विनियमित गर्न केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा सीधा कार्य गर्दछ, कम टेस्टोस्टेरोन भएका पुरुषहरूमा बोसो र तौल बढेको देख्नु अचम्मको कुरा होइन। यसबाहेक, पुरुषहरूमा कम टेस्टोस्टेरोन स्तर अक्सर केन्द्रीय स्नायु प्रणाली मा टेस्टोस्टेरोन को प्रभाव को कारण ढिलो बेसल चयापचय दर संग क्यालोरी खर्च को कम को परिणाम हो।
टेस्टोस्टेरोन इन्जेक्सनहरू मार्फत टेस्टोस्टेरोन हर्मोन वृद्धिले शरीरमा कम बोसो सामग्रीको साथ वजन संरचना विनियमित गर्न मद्दत गर्दछ। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शनहरूले सुनिश्चित गर्दछ कि बढेको वजन मुख्य रूपमा दुबला मांसपेशी मास हो र शरीरको बोसो होइन। यसले एथलीटहरू र बडीबिल्डरहरूलाई मद्दत गर्दछ किनकि उनीहरूले ठूलो मात्रामा क्यालोरीहरू उपभोग गर्छन् र त्यसपछि तिनीहरूलाई पनि जलाउँछन्, तर मांसपेशी हानि नभई बोसो घट्ने अनुभव गर्छन्।
टेस्टोस्टेरोन इन्जेक्शनले प्रायः टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरू समावेश गर्दछ जुन एस्टरहरूको विभिन्न फाइदाहरूको कारणले माथि वर्णन गरिएको छ। टेस्टोस्टेरोन औषधिको तुलनामा टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शनको सबैभन्दा सामान्य एस्टरहरूको संरचनात्मक गुणहरू, तल उल्लेख गरिएको छ:
Androgen एस्टर सापेक्ष
स्थिति (हरू) Moiet(ies) प्रकार लंबाईa
टेस्टोस्टेरोन अज्ञात C17β Undecanoic एसिड स्ट्रेट-चेन फैटी एसिड 11 1.58 0.63
टेस्टोस्टेरोन phenylpropionate C17β Phenylpropanoic एसिड सुगन्धित फैटी एसिड - (~6) 1.46 0.69
टेस्टोस्टेरोन isocaproate C17β Isohexanoic एसिड शाखायुक्त चेन फैटी एसिड - (~5) 1.34 0.75
टेस्टोस्टेरोन isobutyrate C17β Isobutyric एसिड सुगन्धित फैटी एसिड - (~3) 1.24 0.80
टेस्टोस्टेरोन एनाथेट C17β हेप्टानोइक एसिड स्ट्रेट-चेन फैटी एसिड71.39 0.72
टेस्टोस्टेरोन डिकोनोनेट C17β डेकानोइक एसिड स्ट्रेट-चेन फैटी एसिड 10 1.53 0.65
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट C17β Cyclopentylpropanoic एसिड सुगन्धित फैटी एसिड - (~6) 1.43 0.70
टेस्टोस्टेरोन क्याप्रोएट C17β हेक्सानोइक एसिड स्ट्रेट-चेन फैटी एसिड61.35 0.75
टेस्टोस्टेरोन buciclated C17β Bucyclic एसिडe सुगन्धित कार्बोक्सीलिक एसिड - (~9) 1.58 0.63
तल उल्लेखित प्रत्येक टेस्टोस्टेरोन एस्टरको प्रत्यक्ष विशेषताहरू र तिनीहरूले शरीरमा कसरी प्रदर्शन गर्छन्।
⧫ टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट
टेस्टोस्टेरोन एनाथेट ब्रान्ड नाम, delatesteryl र xyosted अन्तर्गत बेचिन्छ, र प्रत्येक चार हप्तामा इन्ट्रामस्कुलर इंजेक्शन वा सबकुटेनियस इन्जेक्सनको रूपमा दिइन्छ। संयुक्त राज्यमा, यो एक अनुसूची III नियन्त्रित पदार्थ हो र कम टेस्टोस्टेरोन स्तर र ट्रान्सजेन्डर पुरुषहरूमा पीडितहरू बीच प्रयोगको लागि कानूनी छ। क्यानाडामा, एउटै टेस्टोस्टेरोन एस्टर एक तालिका IV नियन्त्रित पदार्थ हो।
टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट कलेजोमा मेटाबोलाइज हुन्छ र चार दिनदेखि पाँच दिनको आधा-जीवनको साथ, पिसाबमा उत्सर्जित हुन्छ।
⧫ टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट सबैभन्दा सामान्य रूपमा प्रयोग गरिएको टेस्टोस्टेरोन एस्टर हो जुन ब्रान्ड नाम डिपो टेस्टोस्टेरोन अन्तर्गत बेचिन्छ। ब्रान्ड नामको साथ खरिद गर्दा यो थोरै मूल्यवान पक्षमा हुन्छ यद्यपि, टेस्टोस्टेरोन एस्टरको जेनेरिक रूपहरू डेपो टेस्टोस्टेरोनको मूल्यको लगभग आधा हुन्छन्। टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट कम टेस्टोस्टेरोन स्तर भएका पुरुषहरू र संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाका एथलीटहरूका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ, यो एक तालिका II नियन्त्रित पदार्थ हो र तदनुसार तालिका IV नियन्त्रित पदार्थ हो।
इन्ट्रामस्कुलर इन्जेक्सनको रूपमा मात्र दिइन्छ, टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट कलेजोमा मेटाबोलाइज हुन्छ र पिसाब र मल दुवैमा उत्सर्जित हुन्छ, यद्यपि एस्टरको निष्क्रिय मेटाबोलाइटहरूको मूत्र एकाग्रता उल्लेखनीय रूपमा उच्च हुन्छ। यो 8 दिन को आधा जीवन छ।
⧫ टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट
ब्रान्ड नाम, टेस्टोभिरोन, अन्तर्गत बेचियो टेस्टोस्टेरोन propionate एक टेस्टोस्टेरोन एस्टर हो जुन या त इन्ट्रामस्कुलर इंजेक्शन मार्फत वा प्रशासन को मुख मार्ग मार्फत प्रशासित गरिन्छ। माथिका एस्टरहरू जस्तै, टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट पनि क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा तालिका III नियन्त्रित पदार्थ र तालिका IV नियन्त्रित पदार्थ हो।
टेस्टोभाइरोनको आधा-जीवन 20 घण्टा हुन्छ, र एक पटक कलेजोमा चयापचय भएपछि, टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट मुख्य रूपमा र पूर्ण रूपमा मूत्रमा उत्सर्जित हुन्छ।
⧫ टेस्टोस्टेरोन Sustanon 250
Sustanon 250 वा Sustanon 100 एक इंट्रामस्कुलर इन्जेक्सन हो जुन चार फरक टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरूको संयोजनसँग तयार हुन्छ, अर्थात्, टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियोनेट, टेस्टोस्टेरोन डेकानोएट, टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट, र टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट। यो 1 मिलीलीटर तेलको तयारी हो जसमा यहाँ उल्लेख गरिएको टेस्टोस्टेरोन एस्टरको 250 मिलीग्राम हुन्छ।
Sustanon ग्रेट ब्रिटेनमा टेस्टोस्टेरोन प्रतिस्थापनको रूपमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यो पनि एक हो जुन प्रायः बडीबिल्डरहरू र एथलीटहरूले रुचाइन्छ।
⧫ टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियोनेट
टेस्टोलेन्ट ब्रान्ड नाम अन्तर्गत बेचिएको, टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियोनेट एक टेस्टोस्टेरोन एस्टर हो जसलाई टेस्टोस्टेरोन फेनप्रोपियोनेट र टेस्टोस्टेरोन हाइड्रोसिनामेट पनि भनिन्छ। यो माथि उल्लेखित Sustanon 250 को एक घटक हुन्थ्यो जुन अब केवल टेस्टोस्टेरोन isocaproate समावेश गर्दछ। यो ग्रेट ब्रिटेन र रोमानियामा व्यापक रूपमा वितरण गरिएको थियो, धेरै उत्पादनहरूमा सक्रिय घटकको रूपमा जसमा अन्य टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरू पनि थिए। यद्यपि, यो हालको रूपमा बजार वा वितरण गरिएको छैन र प्रायः अनुसन्धान उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ।
⧫ टेस्टोस्टेरोन डेकानोएट
टेस्टोस्टेरोन डेकानोएट एकल टेस्टोस्टेरोन एस्टर तयारीको रूपमा बेचिदैन तर बरु टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट र टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियोनेटको साथमा Sustanon तयारीको एक घटक हो। यो एस्टर हाल यसको कार्यको लामो अवधिको कारण अध्ययन भइरहेको छ, तथापि, एकल-औषधि तयारीको रूपमा कार्य गर्ने क्षमताको कमीले यसको प्रभावलाई बाधा पुर्‍याउँछ।
⧫ टेस्टोस्टेरोन Isocaproate
टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट Sustanon 250 वा Sustanon 100 ब्रान्ड नाम अन्तर्गत बेचिन्छ। यो एक इन्ट्रामस्कुलर इन्जेक्सनको रूपमा उपलब्ध छ जुन मेटाबोलाइज्ड र पिसाबमा उत्सर्जित हुन्छ।
⧫ टेस्टोस्टेरोन undecanoate
ब्रान्ड नाम Andriol र Aveed अन्तर्गत बेचिएको, टेस्टोस्टेरोन undecanoate, वा testosterone undecylate यसको कार्यको लामो अवधिको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो टेस्टोस्टेरोन एस्टरले चियाको बीउको तेलसँग तयार गर्दा २१ दिनको आधा-जीवन हुन्छ र क्यास्टरको तेलसँग तयार गर्दा लगभग ३३ दिन हुन्छ। टेस्टोस्टेरोन अन्डकानोएट सबैभन्दा लामो आधा-जीवन भएको एउटा हो, टेस्टोस्टेरोन डिकानोएट भएका सबै टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरूमध्ये दोस्रो स्थानमा आउँछ।
टेस्टोस्टेरोन undecanoate संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा क्रमशः तालिका III नियन्त्रित पदार्थ र तालिका IV नियन्त्रित पदार्थ हो। इन्ट्रामस्कुलर इन्जेक्शनको रूपमा प्रशासित, उत्पादन कलेजोद्वारा मेटाबोलाइज हुन्छ र मुख्य रूपमा मूत्रमा उत्सर्जित हुन्छ। लामो आधा-जीवन र 1000 मिलीग्रामको प्रशासनिक खुराकको कारण, टेस्टोस्टेरोन अन्डकानोएट प्रत्येक 12 हप्तामा मात्र प्रशासित गरिन्छ।
शरीर निर्माणको लागि उत्तम टेस्टोस्टेरोन एस्टरमा निर्णय गर्नु अघि, एस्टरहरूले के गर्छ र तिनीहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। यसबाहेक, व्यक्तिगत आवश्यकताहरू निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ र कति टेस्टोस्टेरोन आवश्यक छ, साथै बडीबिल्डरहरू र एथलीटहरू टेस्टोस्टेरोन इन्जेक्सनहरू प्राप्त गर्न इच्छुक छन्। एकचोटि यो सबै निर्धारित भएपछि, उत्तम टेस्टोस्टेरोन एस्टरको खोजी सुरु हुन सक्छ।
टेस्टोस्टेरोन propionate sustanon संगै सबैभन्दा लागत-कुशल र प्रभावकारी टेस्टोस्टेरोन एस्टर हो। बडीबिल्डरहरू प्रायः यी दुई टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरूद्वारा भरोसा र कसम खान पाइन्छन्। वास्तवमा, यी दुई शरीर सौष्ठव को लागी सबै भन्दा राम्रो टेस्टोस्टेरोन मानिन्छ यद्यपि, यो शरीर निर्माणकर्ता को आवश्यकता र इच्छा को आधार मा परिवर्तन को विषय हो।
थप जानकारीको लागि, कच्चा स्टेरोइड आपूर्तिकर्ता सम्पर्क गर्न सकिन्छ ताकि यो बुझ्न सकिन्छ कि तपाईको लागि कुन सही हुन सक्छ र कुन सबैभन्दा लोकप्रिय हो, र किन। यदि टेस्टोस्टेरोन इन्जेक्सनहरू तपाईंले प्रयोग गर्न चाहनुभएको कुरा होइन भने, टेस्टोस्टेरोनका अन्य प्रकारहरू जस्तै टेस्टोस्टेरोन चक्कीहरू कच्चा टेस्टोस्टेरोन पाउडरको साथ पनि उपभोग गर्न सकिन्छ।
1. तपाईंले टेस्टोस्टेरोन बूस्टर पाउडरहरू किन विचार गर्नुपर्छ?
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, उमेर बढ्दै जाँदा हर्मोनको स्तर घट्दै जान्छ। 20 र 25 को बीचको उमेर हो जब स्तर आफ्नो उच्चतम मा छ। तिसको दशकको मध्यमा प्रवेश गर्दा तपाईको हर्मोनको स्तर बिस्तारै घट्न थाल्छ। उमेरसँगै टेस्टोस्टेरोनको स्तर कम हुनु सामान्य प्रक्रिया हो। तैपनि, हर्मोनद्वारा समर्थित शरीरका विभिन्न कार्यहरू प्रभावित हुने कुरा के हो।
तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि कसरत गर्दा पनि वजन घटाउन गाह्रो हुन्छ; पहिलेको जस्तो यौन प्रदर्शन राम्रो हुँदैन, र मांसपेशी विकास प्रभावित हुन्छ। साथै, मांसपेशी वृद्धि पर्याप्त ढिलो हुन्छ। तर तपाईले अहिले नै चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यहाँ प्राकृतिक समाधानहरू छन्, आहार पूरकको रूपमा, जुन बजारमा उपलब्ध छन्। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर पाउडरहरू जुन प्राकृतिक तत्वहरूबाट बनाइएका छन् एक मौका दिनुपर्छ किनकि धेरै मानिसहरूले कुनै पनि प्रतिकूल साइड इफेक्ट बिना यी पूरकहरूबाट लाभ उठाएका छन्।
ध्यान दिनुहोस् कि यी पूरकहरू 60 को दशकमा कसैको स्तर बढाउनको लागि तिनीहरूको 20 को उमेरमा कान्छोसँग मिलाउन डिजाइन गरिएको होइन। तिनीहरू स्तरहरू बढाउनको लागि सिर्जना गरिएका छन्, त्यसैले शरीरले सबै आवश्यक कार्यहरू गर्दछ जुन अपेक्षाकृत राम्रो परिणामहरूको साथ हार्मोन स्तरमा निर्भर हुन्छ।
2. टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लिनुका फाइदाहरू के हुन्?
टेस्टोस्टेरोन बूस्टरहरू सामान्यतया प्राकृतिक पूरक हुन् जसले तपाईंको शरीरमा टेस्टोस्टेरोन र टेस्टोस्टेरोन-सम्बन्धित हार्मोनहरू बढाउँछ। केही टेस्टोस्टेरोन बूस्टरहरूले एस्ट्रोजन, महिला सेक्स हार्मोनलाई रोकेर पनि काम गर्छन्।
♦ हाइपोगोनाडिज्मबाट पीडित बिरामीहरूका लागि (जब यौन ग्रंथिहरूले कम वा कुनै यौन हार्मोनहरू उत्पादन गर्दैन), टेस्टोस्टेरोन बूस्टरहरूले उनीहरूलाई ऊर्जावान र उत्साहित महसुस गराएर उनीहरूको संसारलाई जोसिलो रूपमा घुमाउन सक्छ।
♦ टेस्ट बूस्टरहरू लिइरहेका केही पुरुषहरूले आफ्नो मुडमा सकारात्मक परिवर्तन, मांसपेशीको मास, हड्डीको घनत्व, र सेक्स ड्राइभमा सकारात्मक परिवर्तन देख्न सक्छन्।
♦ थप रूपमा, टेस्टोस्टेरोन बूस्टरहरूले इरेक्टाइल डिसफंक्शनसँग सम्बन्धित समस्याहरूमा मद्दत गर्न सक्छ र तिनीहरूलाई ओछ्यानमा लामो समयसम्म टिकाउन सक्छ।
♦ टेस्टोस्टेरोन पूरकहरूले हृदय रोग र डिमेन्सिया सम्बन्धी रोगहरूको जोखिम कम गर्ने विश्वास गरिन्छ। यद्यपि, जो हृदय रोग र स्ट्रोकको खतरामा छन् तिनीहरू कुनै पनि प्रकारको टेस्टोस्टेरोन बूस्टरहरू सुरु गर्नु अघि सावधान हुनुपर्छ। यदि तपाइँसँग हृदय समस्या छ तर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आवश्यक छ भने, कुनै पनि उपचार सुरु गर्नु अघि आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
3. किन धेरै बडीबिल्डरहरूले स्टेरोइड टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट पाउडर किन्न रुचाउँछन्?
एनाबोलिक स्टेरोइड टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट पाउडर मुख्य रूपमा बडीबिल्डरहरू, एथलीटहरू, र फिटनेस "बफहरू" द्वारा प्रयोग गरिन्छ जसले स्टेरोइडहरूले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन्छ र/वा उनीहरूको शारीरिक प्रदर्शन सुधार गर्दछ। स्टेरोइडहरू दुबला शरीरको मास, बल र आक्रामकता बढाउनको लागि कथित छन्। टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट पाउडरले कसरतको बीचमा रिकभरी समय कम गर्ने विश्वास गरिन्छ, जसले यसलाई कडा तालिम दिन सम्भव बनाउँछ र यसरी थप बल र सहनशीलता सुधार गर्दछ। एथलीट नभएका केही व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो सहनशीलता, मांसपेशीको आकार र बल बढाउन टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट तेलहरू इन्जेक्सन गर्छन्, र शरीरको बोसो घटाउँछन् जुन तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि व्यक्तिगत रूप सुधार गर्दछ। त्यसोभए, बिक्रीको लागि टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट पाउडर बजारमा धेरै सामान्य कुरा हो, जहाँ खरीददारहरू छन्, त्यहाँ विक्रेताहरू छन्। AASraw ले सधैं चीनमा वास्तविक परीक्षण ई पाउडर र अन्य टेस्टोस्टेरोन पाउडरहरू प्रदान गर्दछ।
4.के टेस्टोस्टेरोन पाउडर अवैध छ?
टेस्टोस्टेरोन पाउडरको कानुनी स्थिति देशको कानून र यो एक प्रिस्क्रिप्शन औषधि हो वा होइन मा निर्भर गर्दछ। संयुक्त राज्यमा, टेस्टोस्टेरोन पाउडर एक अनुसूची III नियन्त्रित पदार्थ हो, जसको मतलब यो हो कि तपाइँ तपाइँको डाक्टरबाट वैध नुस्खा बिना यो एनाबोलिक स्टेरोइड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईं काउन्टरमा टेस्टोस्टेरोन पाउडर किन्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ तर यो तपाईंको देशको कानुनमा निर्भर हुनेछ। उदाहरण को लागी, तपाइँ एक प्रिस्क्रिप्शन बिना मेक्सिको मा काउन्टर मा टेस्टोस्टेरोन पाउडर किन्न सक्नुहुन्छ तर यो संयुक्त राज्य मा टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट ल्याउन को लागी कानून को बिरुद्ध हो।
5. कसरी टेस्टोस्टेरोन तेलहरू चरण-दर-चरण होमब्रू गर्ने? (उदाहरणका लागि टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट तेलहरू)
धेरैजसो मानिसहरूको लागि, तिनीहरू टेस्टोस्टेरोन तेलहरू आफैं गर्न रुचाउँछन्, यो धेरै सजिलो प्रक्रिया हो र हामी द्वारा समाप्त गर्न सकिन्छ, जबसम्म तपाईं सबै उपकरणहरू र रेसिपीहरू तयार गर्नुहुन्छ, किनभने धेरै स्टेरोइड कच्चाहरूमा इन्जेक्सनको लागि समाप्त तेलहरू गर्न समान प्रक्रिया हुन्छ। अब गरौं। यस उदाहरणको लागि म केवल टेस्टोस्टेरोन enanthate प्रयोग गर्न जाँदैछु।
म प्रति बोतल 10ml मा 10 बोतल टेस्टोस्टेरोन enanthate बनाउन जाँदैछु। त्यो कुल 100ml पदार्थ हो र हामी यसलाई 250mg/ml बनाउँछौं
यसका लागि हामी 2/18 को BA/BB अनुपात प्रयोग गर्नेछौं, जसको अर्थ 2%ba र 18% bb हो, तपाईंसँग यसमा bb हुनु "पर्दैन" तर यसले मिश्रणलाई पातलो बनाउन मद्दत गर्छ र तपाईंलाई कम प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। बा, शटलाई पीडारहित बनाउन र यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने सजिलै 400mg/ml मा जान सक्नुहुन्छ।
1) रोइड क्याल्कुलेटरमा सबै चरहरू प्लग गर्नुहोस्,
यहाँ तपाईंले तेल ml's = 100ml मा राख्नुहुनेछ
खुराक 250mg/ml हुन गइरहेको छ
पाउडरको तौललाई .75 मा छोड्नुहोस्, यसले प्राय सबै चीजहरूको लागि राम्रो काम गर्दछ
बा, प्लग इन .०२(२%)
BB, प्लग इन .18(18%)
यसले तपाईंलाई क्यालकुलेटर अनुसार निम्न दिन्छ
-61.25ml बाँझ तेल (मलाई अंगूरको दाना मन पर्छ)
-25.00 ग्राम एनन्थेट पाउडर
- BA को 2ml
2) 500ml बीकर प्रयोग गर्नुहोस् र यसलाई सकेसम्म राम्रोसँग बाँझ राख्नुहोस्, यो ठूलो कुरा होइन किनकि हामीले यसबाट निकाल्ने कुरालाई फिल्टर गर्नेछौं। 25.00 ग्राम एनन्थेट पाउडर लिनुहोस् र बीकरमा राख्नुहोस्।
3) त्यहाँ BA को 2ml र BB को 18ml राख्नुहोस्, यसलाई सजिलैसँग 10 वा 20cc सिरिन्जले मापन गरिन्छ। यो सबै पाउडर भंग गर्न पर्याप्त छैन जस्तो देखिन्छ, तर यो हुनेछ।
4) स्टोभको माथि तातो स्तर3वा सो भन्दा माथि फ्राइङ प्यान राख्नुहोस्, मलाई प्यानमा पनि केही पानी राख्न मनपर्छ। त्यसपछि प्यानमा बा/बीबी/पाउडरको साथ बीकर सेट गर्नुहोस् र पानी/प्यानलाई बीकरलाई तताउन दिनुहोस्। तपाईंले पाउडर "पग्लन" वा भंग गर्न सुरु देख्नुहुनेछ र यसले प्रायः स्पष्ट समाधान बनाउनेछ। यस प्रक्रियालाई हलचल र गति दिन तपाईं गिलास रड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
5) ba/bb ले पाउडर घुलिसकेपछि, अब 61.25ml बाँझ तेल हाल्नुहोस् र तातो छोड्नुहोस् र केही मिनेटको लागि गिलास रडले हलचल गर्नुहोस्, तपाईसँग राम्रो स्पष्ट मिश्रण हुनेछ।
6) अर्को म मिश्रणलाई न्यानो राख्नको लागि तातोलाई १ वा सोभन्दा कम गर्न चाहन्छु... न्यानो हुँदा मिश्रण फिल्टर गर्न यसको कोठाको तापक्रम भन्दा धेरै सजिलो छ।
रबर स्टपर मार्फत आफ्नो नयाँ 18g सुई राख्नुहोस् र 100ml बोतलमा राख्नुहोस् जुन निश्चित रूपमा बाँझ छ। फिना रूपान्तरणमा जस्तै सुईको माथि .45 whatman फिल्टर राख्नुहोस्।
7) न्यानो तेल निकाल्न १० एमएल सिरिन्ज प्रयोग गर्नुहोस्, तेललाई वाटम्यान फिल्टरबाट र बाँझ गिलासको शीशीमा धकेल्नुहोस्। तपाईंले जति ठूलो सिरिन्ज प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तेल धकेल्न गाह्रो हुन्छ। म सामान्यतया बीकरबाट तेल निकाल्न 10ml सिरिन्ज प्रयोग गर्छु र त्यसपछि 30ml सिरिन्ज भर्छु र 10ml सिरिन्जले 10ml मार्फत धकेल्न असम्भव भएको हुनाले धक्का दिन्छु।
8) यो सबै मार्फत धकेलिए पछि तपाईंसँग 100mg/ml मा 250ml एक बाँझ र सुरक्षित इंजेक्शन योग्य स्टेरोइड छ। कसैलाई यस बिन्दुमा अझै बाँझ बनाउन बेक गर्न मनपर्छ तर मलाई यो आवश्यक छैन यदि तपाईंसँग बाँझ सामग्री छ भने। मैले शाब्दिक रूपमा सयौं सीसी लिएको छु र कहिल्यै बाँझोपनको समस्या आएको छैन, बाले यसलाई बाँझ राख्ने काम गर्छ!
9) अब तपाइँ एक पटकमा 10ccs निकाल्न सक्नुहुन्छ र 10 बोतलहरू बनाउनको लागि व्यक्तिगत रूपमा 10ml बोतलहरू भर्न सक्नुहुन्छ।
यो समाप्त तेलहरू गर्नको लागि पूर्ण प्रक्रिया हो, मलाई विश्वास छ कि यो चरण पढे पछि धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिइयो। पाउडरबाट टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट कसरी बनाउने? टेस्टोस्टेरोन पाउडरलाई तेलमा रूपान्तरण कसरी गर्ने? प्रोप तेलहरू र परीक्षण साइप तेलहरू, sus 250 तेलहरू पनि, तिनीहरूको होमब्रू तेल प्रक्रिया समान छ, केवल फरक नुस्खा। नुस्खाको लागि, तपाईले हाम्रो बिक्रीसँग कुरा गर्न आवश्यक छ जब तपाईले अर्डर गर्नुहुन्छ, तिनीहरूले तपाईलाई जान्न चाहनु भएको जानकारी प्रदान गर्ने प्रयास गर्नेछन्।
6. sustanon 250 पाउडर के बनेको छ?
Sustanon 250 एक लोकप्रिय टेस्टोस्टेरोन मिश्रण (मिश्रण) हो र कुनै प्रश्न बिना नै बनाइएको सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रसिद्ध मिश्रण हो। Organon द्वारा निर्मित, Sustanon 250 को पछाडिको विचार एउटै कम्पाउन्डमा सानो (छोटो) र ठूलो (लामो) एस्टर टेस्टोस्टेरोनहरू प्रदान गर्ने थियो। यसले व्यक्तिलाई टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको स्थिर रगत स्तर कायम राख्न अनुमति दिनेछ र एकै समयमा एकै साथमा छिटो अभिनय गर्ने फाइदाहरू प्राप्त गर्दैछ।
टेस्टोस्टेरोन propionate 30 mgs: यो यौगिक बनाउन 250 mgs मध्ये, केवल 30mg (12%) धेरै छोटो propionate एस्टर हो; त्यसैले, sustanon 250 लाई प्रोपियोनेट जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन। सामान्यतया, प्रोपियोनेट एस्टर केवल 8 हप्ता वा कमको चक्रमा छोटो एस्टर खोज्नेहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ, जसलाई हरेक दिन वा हरेक दिन इन्जेक्सन गर्न आवश्यक छ। आधा जीवन मात्र 3.5 दिन हो, त्यसैले यो अन्य एस्टर भन्दा छिटो प्रणाली भित्र र बाहिर छ। वास्तवमा, धेरै बडीबिल्डरहरूले यो पनि भन्छन् कि उनीहरूले प्रोपियोनेटबाट कम अरोमेटाइजेशन अनुभव गर्छन्, जुन यो प्रणालीमा धेरै लामो समयसम्म रहँदैन भन्ने तथ्यसँग केही गर्न सक्छ।
टेस्टोस्टेरोन phenylpropionate ६० मिलीग्राम: यो एस्टर मिश्रणको दोस्रो सबैभन्दा छोटो हो, र यो प्रायः Nandrolone Phenylpropionate (NPP) मा पाइन्छ। यसको केवल 4.5 दिनको आधा जीवन छ, त्यसैले प्रोपियोनेट बिस्तारै छोड्दै गएकोले, तपाईले फिनाइलप्रोपियोनेट त्यहाँ हुने आशा गर्न सक्नुहुन्छ र लामो एस्टरहरू लात सुरु गर्नु अघि बढावा दिन सक्नुहुन्छ।
टेस्टोस्टेरोन iसोकाप्रोएट ६० मिलीग्राम: यो9दिनको सूचीबद्ध आधा जीवन भएको तेस्रो सबैभन्दा छोटो एस्टर हो, जुन एनन्थेट एस्टरको नजिक छ, किनकि यसको 10.5 दिनको आधा जीवन छ।
टेस्टोस्टेरोन decanoate ६० मिलीग्राम: यो धेरै लामो एस्टरले sustanon मा सक्रिय पदार्थको ठूलो हिस्सा राख्छ, कुल 100 mgs मध्ये 250 mgs बनाउँछ। यस एस्टरको आधा जीवन एक पूर्ण 15 दिन हो।
उदाहरणका लागि टेस्टोस्टेरोन sustanon पाउडर नुस्खा:
टेस्टोस्टेरोन Sustanon 250mg/ml @ 100ml खाना पकाउने नुस्खा:
टेस्टोस्टेरोन ब्लेन्ड पाउडर 25 ग्राम (18.75 एमएल)
59.25ml अंगूर तेल
7. कुन टेस्टोस्टेरोन राम्रो टेस्टोस्टेरोन Sustanon 250 पाउडर वा enanthate पाउडर हो?
जब यो Sustanon 250 पाउडर र टेस्टोस्टेरोन Enanthate पाउडर तुलना गर्न को लागी आउँदछ, प्राथमिक भिन्नता एस्टर लम्बाई मा छ।
Sustanon 250 पाउडर, टेस्टोस्टेरोनको एकदम लामो-एस्टेर्ड संयोजन भएकोले, "किक इन" गर्न अलि लामो समय लाग्छ तर यस एनाबोलिक कम्पाउन्डबाट फाइदाहरू कम बारम्बार इंजेक्शनहरूसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ। टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट, अर्कोतर्फ, छोटो एस्टरको कारणले हरेक हप्ता प्रशासित गर्न आवश्यक छ यद्यपि यसको प्रभाव Sustanon भन्दा छिटो हुन्छ।
टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट पाउडर, जब 10-12 हप्ताको चक्रको लागि प्रयोग गरिन्छ, एक आदर्श स्टेरोइड हो किनभने यो एथलीटहरूको लागि टेस्टोस्टेरोन स्तर निर्धारण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। यद्यपि, यो फाइदा केही हदसम्म हराउन सक्छ जब चक्रको अवधि 4-6 हप्ता हुन्छ किनभने स्टेरोइडको प्रभाव 2-4 हप्ता पछि देखिन थाल्छ। मिश्रित एस्टरहरूको कारणले गर्दा, रगतको स्तरको कुशल व्यवस्थापनको कुरा गर्दा Sustanon सामना गर्न गाह्रो स्टेरोइड हो।
यद्यपि, टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट पाउडर Sustanon भन्दा बढी सहनशील मानिन्छ जब यो एस्ट्रोजेनिक साइड-इफेक्ट व्यवस्थापनमा आउँछ। यो तथ्यको कारण हो कि टेस्टोस्टेरोन रगत स्तरहरू टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट प्रयोगको साथ सुस्त गतिमा निर्माण हुन्छ र यसको मतलब यो पनि हो कि साइड इफेक्ट चाँडै देखा पर्दैन। Sustanon 250 पाउडर र Testosterone Enanthate पाउडर बीचको छनोट मात्र स्टेरोइड चक्र र विगतका अनुभवहरू (यदि कुनै हो) बाट अपेक्षाहरूमा निर्भर गर्दछ।
8. टेस्ट ई पाउडर बनाम। सी पाउडर परीक्षण गर्नुहोस्
▪ टेस्ट ई पाउडर र टेस्ट सी पाउडर दुई प्रकारका एस्टेरिफाइड टेस्टोस्टेरोन भेरियन्टहरू हुन्।
▪ टेस्टोस्टेरोन एस्टेरिफिकेशनको मुख्य उद्देश्य चिकित्सा र गैर-चिकित्सा प्रयोगलाई अधिकतम बनाउनु हो।
▪ त्यसकारण, दुबै भेरियन्टहरू बढी व्यावहारिक र प्रयोगयोग्य छन्।
▪ तिनीहरूले आधा-जीवन बढाएका छन्।
▪ तिनीहरू टेस्टोस्टेरोन बूस्टरहरू जस्तै लगभग समान प्रभाव भएका एन्ड्रोजन हुन्।
▪ कम टेस्टोस्टेरोन स्तर बढाउन औषधि र शरीर निर्माणमा दुवै महत्त्वपूर्ण छन्।
▪ तिनीहरूलाई सुई मार्फत प्रशासित गर्न सकिन्छ।
▪ दुबै बढि आधा-जीवन र रिलीजको लामो समयको सञ्झ्यालका कारण लोकप्रिय छन् जसले थप सुविधाजनक इंजेक्शन र प्रशासन प्रक्रियाहरू गर्न सक्षम बनाउँछ।
टेस्ट ई पाउडर वा टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट पाउडरले टेस्टोस्टेरोनको सेतो वा सेतो क्रिस्टलीय एस्टर C26H40O3 लाई बुझाउँछ जुन विशेष गरी नपुंसकता, नपुंसकता, एन्ड्रोजनको कमी, एन्ड्रोपजका लक्षणहरू, र ओलिगोस्पर्मियाको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ जबकि टेस्ट सी पाउडर वा टेस्टोस्टेरोन पाउडर साइप। तेल-घुलनशील 17 (बीटा)-साइक्लोपेन्टाइलप्रोपियोनेट एस्टरमा एन्ड्रोजेनिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूपमा पुरुषहरूमा कम टेस्टोस्टेरोन स्तरहरूको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। यसरी, यसले टेस्ट ई पाउडर र टेस्ट सी पाउडर बीचको मुख्य भिन्नता बताउँछ। साथै, टेस्ट ई पाउडर र टेस्ट सी पाउडर बीचको अर्को भिन्नता हो कि परीक्षण ई पाउडरको विश्वव्यापी उत्पत्ति छ जबकि टेस्ट सी एक अमेरिकी उत्पादन हो।
टेस्ट ई पाउडर र टेस्ट सी पाउडर बीचको मुख्य भिन्नता आधा-जीवन हो। द परीक्षण ई को आधा जीवन 10.5 दिन हो जबकि टेस्ट C को आधा-जीवन 12 दिन हो। टेस्ट E को मानक खुराक 100 देखि 600 हप्ताको लागि 10 देखि 12 मिलीग्राम प्रति हप्ता हो जबकि टेस्ट C को मानक खुराक 400 देखि 500 ​​मिलीग्राम प्रति हप्ता 12 हप्ता हो। यसबाहेक, टेस्ट सी भन्दा टेस्ट ई धेरै पटक सुई दिनुपर्छ। लोकप्रियता पनि टेस्ट ई र टेस्ट सी बीचको भिन्नता हो। टेस्ट ई अधिक लोकप्रिय छ जबकि टेस्ट सी तुलनात्मक रूपमा कम लोकप्रिय छ।
टेस्ट ई पाउडर वा टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट 10.5 दिनको आधा-जीवनको साथ एस्टेरिफाइड टेस्टोस्टेरोन संस्करणको एक प्रकार हो। यो एक सार्वभौमिक मूल संग 7-कार्बन एस्टर हो। अर्कोतर्फ, टेस्ट सी एक प्रकारको एस्टेरिफाइड टेस्टोस्टेरोन संस्करण हो जसको आधा-जीवन 12 दिन हुन्छ। साथै, यो अमेरिकी मूलको 8-कार्बन एस्टर हो। यद्यपि, कम लम्बाइको आधा-जीवनको कारण, टेस्ट ईलाई टेस्ट सी पाउडर भन्दा धेरै पटक सुई दिनु पर्छ। तसर्थ, टेस्ट ई र टेस्ट सी बीचको मुख्य भिन्नता भनेको प्रयोगकर्ताले अधिकतम प्रभावको लागि प्रत्येक कम्पाउन्ड चलाउन कति समय आवश्यक छ, साथै एस्टरमा आधारित इंजेक्शन फ्रिक्वेन्सी।
9. टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट चक्र कसरी सुरु गर्ने?
धेरैले प्रश्न सोध्छन् कि छोटो चक्र बढी लाभदायक छ कि छैन। जवाफ यो हो कि तिनीहरू हुन्, लामो एनाबोलिक स्टेरोइड चक्रहरूले अधिक गम्भीर HPTA (हाइपोथालेमिक पिट्युटरी टेस्टिक्युलर एक्सिस) दमनको मुद्दा प्रस्तुत गर्दछ र बन्द गर्दछ, परिणामस्वरूप चक्र पछिको हप्ताहरूमा धेरै गाह्रो रिकभरी अवधि हुन्छ। धेरै जसो समय छोटो चक्रको साथमा, HPTA ले, सामान्य मानिसको सर्तमा, एक्जोजेनस हर्मोनहरूमा छिटो "समाप्त'" गर्दैन। यसैले धेरैले 8 हप्ताको चक्रजस्ता छोटो चक्रको आनन्द लिनेछन् - व्यक्तिले साइकलमा छिटो पुग्न, आफ्नो लाभ छिट्टै बनाउन, र साइकलबाट बाहिर निस्कन र PCT (पोस्ट साइकल थेरापी) मा शरीरको गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रनु अघि नै आनन्द लिन सक्नेछ। HPTA दमन वा बन्द। निस्सन्देह, प्रत्येक व्यक्तिसँग HPTA बन्दको लागि आफ्नै अद्वितीय संवेदनशीलता हुन्छ (केही अरूहरू भन्दा ढिलो बन्द हुन्छन्, केही अरूहरू भन्दा छिटो, र केही बन्द हुँदैनन्)। तर विशेष गरी टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट चक्रहरूको आनन्द लिने धेरैले साझा गरेको सामान्य विचारको रूपमा यो हो कि छोटो चक्र यी कारणहरूको लागि राम्रो हो।
❶ शुरुआती टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट चक्र
शुरुआती टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट साइकल उदाहरण (10 हप्ता कुल चक्र समय)
टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट 75 -125mg हरेक अर्को दिन (300-500mg/हप्ता)
यो सबैभन्दा उत्कृष्ट शुरुआती आधारभूत चक्र हो, र शुरुआतीहरूको लागि सबै टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट चक्रहरूमध्ये सबैभन्दा सरल हो। यो एनाबोलिक स्टेरोइडको लागि सामान्य रूपमा एनाबोलिक स्टेरोइड प्रयोगको संसारमा कुनै पनि नयाँ आगमनको लागि उत्तम परिचय हो।
❷ मध्यवर्ती टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट चक्र
मध्यवर्ती टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट चक्र उदाहरण (10 हप्ता कुल चक्र समय)
टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट प्रत्येक अर्को दिन 75-125mg मा (300-500mg/हप्ता)
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) 400mg/हप्ता मा
हप्ता 1-4: Dianabol 25mg/दिन मा
चक्रको एक उत्तम उदाहरण जसमा एक व्यक्तिले छोटो अभिनय गर्ने एनाबोलिक स्टेरोइड प्रयोग गर्नेछ, जस्तै टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, नान्ड्रोलोन डेकानोएट (डेका डुराबोलिन) जस्ता लामो एस्टर गरिएको लामो-अभिनय एनाबोलिक स्टेरोइडको साथ। विशिष्ट विवरणमा, एक व्यक्तिले सामान्यतया प्रत्येक अर्को दिन टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेटलाई प्रशासित गर्नेछ, जबकि डेका डुराबोलिनलाई हप्तामा दुई पटक समान रूपमा अलग राखिनेछ (उदाहरणका लागि सोमबार र बिहीबार)। यस प्रकारको टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट चक्रमा संलग्न व्यक्तिले नान्ड्रोलोन डेकानोएट इंजेक्शनहरूलाई फरक फरक टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इंजेक्शनहरूसँग मिलाउन तालिका र समय निर्धारण गर्नेछ। यो भन्नु हो कि, उदाहरणका लागि, यदि टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेटको इंजेक्शन तालिका निम्न दिनहरूमा मङ्गलबार, बिहीबार, शनिबार, सोमबार, बुधबार अवतरण हुन्छ भने नान्ड्रोलोन डेकानोएट त्यो प्रशासन तालिकाको मंगलबार र सोमबार प्रशासित हुनेछ।
❸ उन्नत टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट चक्र
उन्नत टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट चक्र उदाहरण (8 हप्ता कुल चक्र समय)
टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट प्रत्येक अर्को दिन 25mg मा (100mg/हप्ता)
Tren Acetate 100mg हरेक अर्को दिन (400mg/हप्ता)
उन्नत टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट चक्रहरूको एक धेरै विशिष्ट र उत्कृष्ट उदाहरण, यो विशेष चक्र टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेटको प्रयोगलाई TRT खुराकहरूमा प्रयोग गरिएको सहायक यौगिकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन सामान्य कार्यको अनुपस्थितिमा सामान्य शारीरिक कार्य कायम राख्नको लागि विशुद्ध रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो anabolic स्टेरोइड को प्रयोग को परिणाम को रूप मा दबाइन्छ)।
10. म कति पटक टेस्ट साइपियोनेट इन्जेक्ट गर्छु?
यो तपाईंले इंजेक्शन गरिरहनुभएको टेस्टोस्टेरोनको एस्टरको आधा जीवनमा निर्भर गर्दछ।
टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनोएट - हरेक दिन वा प्रत्येक दोस्रो दिन (हरेक दिन सिफारिस गर्नुहोस्)
टेस्टोस्टेरोन enanthate/cypionate/sustanon - हप्तामा एक पटक सही छ, तपाइँ तर्कसंगत प्रत्येक 10 दिन बनाउन सक्नुहुन्छ। डाक्टरहरूले कहिलेकाहीँ प्रत्येक दुई हप्तामा यो दिन्छ, जुन गल्ती हो।
Testosterone decanoate र undecanoate - यी shitty esters प्रयोग नगर्नुहोस्, यदि तपाइँ कसरत गर्नुहुन्छ भने तिनीहरू एथलेटिक प्रदर्शनको लागि वास्तवमै राम्रो छैनन्। सामान्यतया तपाईले हरेक6हप्ता वा सो भन्दा बढी एक विशाल घोडा सुई पाउनुहुन्छ।
यदि तपाईंले आफ्नो इन्जेक्सनलाई धेरै ठाउँमा राख्नुभयो भने तपाईंले केही समय कम T र केही समय अति उच्च Tको साथ पाउनुहुनेछ। त्यसैले तपाईंले नाटकीय मूड परिवर्तनहरू, र तपाईंको शटको अन्तिम दिनमा डिप्रेसन/हाइनी पाउनुहुनेछ।
11. टेस्ट e/cyp/prop/sus 250 कसरी इन्जेक्ट गर्ने?
यसलाई नितम्बको मांसपेशीमा सुई दिनुपर्छ। यसलाई नसमा सुई दिनु हुँदैन। तपाईले अनुसरण गरिरहनुभएको चक्र अनुसार सही खुराक पछ्याउनुहोस्। परीक्षण ई वा परीक्षण cyp इन्जेक्सन गर्नु वास्तवमा एक धेरै सरल प्रक्रिया हो एक पटक तपाईंले मार्गदर्शनको साथ केहि पटक गरेपछि। टेस्टोस्टेरोन prop/cyp/E केवल इंजेक्शन द्वारा प्रशासित गरिन्छ, जुन निस्सन्देह तपाईंको शरीरमा टेस्टोस्टेरोन प्राप्त गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो। एक इंजेक्शन संग, तपाइँ सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँको टेस्टोस्टेरोन ले धेरै छिटो प्रभाव लिन्छ र तपाइँ लाई कम टेस्टोस्टेरोन को साइड इफेक्टहरु लाई पार गर्न को लागी सजिलो बनाउँछ।
12. बल्किङ वा काट्नको लागि कति टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट खुराक?
यदि तपाइँ बल्क अप गर्न र दुबला मांसपेशी मास प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ प्रत्येक हप्ता कम्तिमा 200-600 इंजेक्शनहरूमा 2-3 मिलीग्राम स्टेरोइड इन्जेक्सन गर्नुपर्छ। धेरैजसो प्रयोगकर्ताहरूले सामान्यतया यी सुईहरू फैलाउँछन्, उदाहरणका लागि पहिलो र दोस्रो दिन प्रति इंजेक्शन १०० मिलीग्राम, त्यसपछि अर्को हप्तामा प्रत्येक अर्को दिन २०० मिलीग्राम।
यदि तपाइँ बोसो गुमाउन र तपाइँको शरीरको परिभाषा सुधार गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट खुराकमा कटौती गर्न सक्नुहुन्छ। 200-600mg को साप्ताहिक खुराकको साथ टाँसिनुको सट्टा, 100-200 mg प्रति हप्ता प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाइँ दुबै उद्देश्यका लागि स्टेरोइड प्रयोग गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाइँ 200 हप्ता सम्म पुग्ने सम्म प्रत्येक अर्को दिन6मिलीग्रामको साथ सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि प्रत्येक अर्को दिन 100mg मा कटौती गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
13.के महिलाहरूले टेस्टोस्टेरोन इन्जेक्सन गर्न सक्छन्? चक्रको बारेमा कस्तो छ?
आफ्नो शारीरिक र सौन्दर्य प्रदर्शन सुधार गर्न चाहने महिलाहरु नकारात्मक पक्ष लक्षण को विकास को संभावना देखि डराउँदैनन्। एथलीटहरूका लागि, टेस्टोस्टेरोन एनन्थेटको एकल चक्र सिफारिस गरिन्छ, जुन 8 हप्ता भन्दा बढी रहनु हुँदैन। एनाबोलिक स्टेरोइड हप्तामा एक पटक 250mg को खुराकमा प्रशासित गरिन्छ। सम्पूर्ण चक्रको लागि, औषधिको 8 ampoules आवश्यक हुनेछ। पोस्ट-साइकिल थेरापी महिलाहरु को लागी कम्तिमा 21 दिन को लागी हुनुपर्छ। तपाईंले डाक्टरसँग परामर्श र उपयुक्त परीक्षणहरू गरेपछि मात्र6महिना पछि टेस्टोस्टेरोन लिन दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ केही महिलाहरू छन् जसले टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट मात्र समावेश गर्ने स्टेरोइड स्ट्याकको लागि रोज्छन्। महिलाहरू सामान्यतया परीक्षणको साथ स्ट्याक गर्न Anavar, Primobolan वा Masteron छनौट गर्छन्। तपाईंको लागि काम गर्ने छनौट गर्नुहोस्!
14. टेस्ट प्रोपियोनेटले काम गर्न कति समय लाग्छ?
यदि तपाइँ कम टेस्टोस्टेरोनबाट पीडित हुनुहुन्छ र यसको साथमा आउने साइड इफेक्टहरू, तपाइँ सायद टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इंजेक्शन उपचारको नतिजाहरू हेर्न धेरै उत्सुक हुनुहुन्छ। त्यो बुझ्न सकिन्छ, किनकि कम टेस्टोस्टेरोनसँग व्यवहार गर्नु प्रायः सजिलो उपलब्धि होइन। यदि तपाइँ सोच्दै हुनुहुन्छ कि तपाइँको टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इन्जेक्सनहरूले लात लिन कति छिटो लिनेछ, तपाइँ एक्लै हुनुहुन्न। सबैजना जान्न चाहन्छन् कि तिनीहरूले आफ्नो इंजेक्शन उपचारबाट परिणामहरू कति छिटो आशा गर्न सक्छन्।
टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इन्जेक्सनको साथ, तपाईंको शरीरको प्रतिक्रिया समय धेरै कारकहरूको आधारमा भिन्न हुन सक्छ। यसले तपाईंको उमेर र अन्य धेरै कारकहरू समावेश गर्न सक्छ।
सामान्यतया, तपाइँ तपाइँको टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इंजेक्शनहरू लगभग3हप्ता भित्र प्रभाव पार्न सुरु गर्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, कम टेस्टोस्टेरोनको लागि उपचार विधिको रूपमा टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शनहरू प्रयोग गर्दा धैर्य कुञ्जी हो। टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इन्जेक्सनहरूले प्रभाव पार्न6हप्तासम्म लिन सक्छ। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शनबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने बारे थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो TRT टाइमलाइन पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ तपाइँको टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शनहरु को गति संग चिन्तित हुनुहुन्छ वा तपाइँको अवस्था मा प्रभाव पारिरहेको छैन भने, तपाइँ तपाइँको खुराक र आवृत्ति को लागी समायोजन को आवश्यकता को बारे मा सोधपुछ गर्न को लागी तपाइँको चिकित्सा पेशेवर संग परामर्श गर्नुपर्छ।
15. टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट पहिले र पछि के परिणामहरू छन्?
दुई हप्ता पछि कुनै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वा परिणाम रिपोर्ट गरिएको छैन।
एक महिना पछि पहिलो महिनामा मांसपेशी वृद्धि र बोसो जलाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
दुई महिनापछि मांसपेशी वृद्धि दुई महिना पछि देख्न सकिन्छ र साइड इफेक्ट पनि धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि साथ।
तीन महिना पछि बाह्र हप्तामा तपाईंले यो औषधिलाई कूलिङ-अफ अवधिको लागि बन्द गर्नुपर्छ। यद्यपि, यस समय सम्म, तपाईंले महत्त्वपूर्ण मांसपेशिहरु निर्माण गरिसक्नु भएको छ।
16. के मलाई टेस्टोस्टेरोन हर्मोन पाउडर किन्नको लागि प्रिस्क्रिप्शन चाहिन्छ?
हो, यदि तपाइँ मेडिकल कारणहरूको लागि टेस्टोस्टेरोन हर्मोन पाउडर सोर्स गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिन्छ। यदि तपाइँ यसलाई गैर-चिकित्सा कारणहरूको लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई अवैध रूपमा कालो बजारबाट अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै स्टेरोइडहरू छन्। टेस्टोस्टेरोन पाउडर आपूर्तिकर्ता.
17.के चीनमा बिक्रीको लागि वास्तविक टेस्टोस्टेरोन एस्टर पाउडरहरू छन्?
जहाँसम्म हामी सबैलाई थाहा छ, ती टेस्टोस्टेरोन एस्टर पाउडर, टेस्ट ई पाउडर, टेस्ट साइप पाउडर, टेस्ट प्रोप पाउडर, सस 250 पाउडर बजारमा अत्यन्त लोकप्रिय एनाबोलिक स्टेरोइडहरू हुन्, र एनाबोलिक स्टेरोइड कालो बजारमा कुनै पनि प्रयास बिना सजिलै फेला पार्न सकिन्छ। । तिनीहरू पनि यति सामान्य र सजिलै निर्मित छन् कि यो धेरै उचित मूल्यहरु को लागी प्राप्त गरिनु पर्छ। टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट दुबै मानव-ग्रेड फार्मास्यूटिकल ग्रेड उत्पादनहरू, साथै बजारमा भूमिगत प्रयोगशाला (UGL) ग्रेड उत्पादनहरूको रूपमा अवस्थित छ। भिन्नताहरू यहाँ स्पष्ट छन्, गुणस्तर नियन्त्रण मुख्य मुद्दाको साथ, र त्यो फार्मास्यूटिकल ग्रेड टेस्टोस्टेरोन पाउडर सामान्यतया स्पष्ट कारणहरूको लागि अधिक महँगो हुन्छ।
जब तपाइँ केहि टेस्टोस्टेरोन पाउडर अनलाइन खरिद गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाइँले थप सिक्न र अधिक आपूर्तिकर्ताहरू खोज्न आवश्यक छ, तिनीहरूको तुलनामा। मैले सम्झाउन चाहन्छु कि तपाइँ कच्चाको गुणस्तरमा बढी ध्यान दिनुपर्छ, वास्तविक स्टेरोइड कच्चा आपूर्तिकर्ता खोज्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो गर्न सक्छ। तपाईंलाई केही समय बचत गर्न मद्दत गर्नुहोस्, भविष्यमा वफादार ग्राहकहरू र थप व्यवसायहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। AASraw ले धेरै वर्षदेखि यो व्यवसाय गरेको छ र तपाईं थप विवरणहरूको लागि तिनीहरूको बिक्रीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, वा सोध्न सक्नुहुन्छ परीक्षणको लागि नमूना आदेश पहिलो पटक।
18. तपाईं AASraw उत्पादनहरूको बारेमा कसरी सोच्नुहुन्छ? (टेस्ट साइप पाउडर, टेस्ट ई पाउडर, टेस्ट पी पाउडर र Sus 250 पाउडरको लागि कुनै समीक्षाहरू?)
टमी (मार्च ४, २०२१): म साँच्चै खुसी छु कि मैले एकल टेस्टोस्टेरोन प्रोप साइकलहरू गर्न थालेको छु किनभने यो द्रुत मांसपेशी वृद्धि र बल बढाउनको लागि उत्कृष्ट स्टेरोइडहरू मध्ये एक भएको छ। यस एनाबोलिक स्टेरोइडको बारेमा सबैभन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यसले मलाई मेरो कामवासना र यौन ड्राइभमा बढावा दिन्छ।
मिशेल (अप्रिल १८, २०२१): मैले गत महिना परीक्षण साइप कच्चा पाउडर खरिद गरें र यसको बारेमा सबैभन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यसले मलाई मेरो आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्दछ। यो स्टेरोइडले मलाई थप दुबला मांसपेशी मास प्राप्त गर्न साथै जिममा मेरो शारीरिक प्रदर्शन सुधार गर्न मद्दत गरेको छ।
माइक (अगस्ट १६, २०२०): टेस्ट ई पाउडर वजन घटाने को लागी सबै भन्दा राम्रो स्टेरोइडहरु मध्ये एक हो किनभने यसले मलाई साँच्चै शरीरको अतिरिक्त बोसो हटाउन मद्दत गर्दछ। धेरै एकल टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट चक्रहरू गरेपछि दुबला मांसपेशी मास प्राप्त गर्दा मैले धेरै वजन गुमाएको छु।
जे कूपर (मे १२, २०२०): मैले शरीरको बोसो प्रतिशत घटाउन सक्षम भएँ, जबकि Sus 250 तेलहरू इन्जेक्ट गरेपछि दुबला मांसपेशी मास थप्दै। यो स्टेरोइडले मलाई जिममा मेरो फिटनेस लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गरेको छ किनभने यसले वास्तवमै मेरो बल र सहनशीलता स्तर बढाउँछ।
अस्टिन (जुन १७, २०२१): चीनबाट टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट पाउडर किन्ने मेरो पहिलो पटक हो, मैले आश्रा छानेको र वास्तविक परीक्षण ई पाउडर पाएकोमा मैले वास्तवमै सराहना गरें, यो सफल भयो। मलाई टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट साइकल गर्न मन पर्छ र त्यसपछि PCT गर्न मनपर्छ किनभने यसले मलाई मेरो बल कायम राख्न र मेरो दुबला मांसपेशी मास सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। यो स्टेरोइड जिममा आकार र बल प्राप्त गर्नको लागि उपयुक्त छ, जबकि मलाई उत्कृष्ट शारीरिक प्रदर्शन कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
 एपिसेला सीएल, ड्रेबर ए, क्याम्पबेल बी, ग्रे पीबी, होफम्यान एम, लिटिल एसी (नोभेम्बर २००८)। "टेस्टोस्टेरोन र वित्तीय जोखिम प्राथमिकताहरू"। विकास र मानव व्यवहार। २९ (६): ३८४–९०। doi:1/j.evolhumbehav.2008।
 Hoskin AW, Ellis L (2)। "भ्रूण टेस्टोस्टेरोन र अपराध: इभोलुसनरी न्यूरोएन्ड्रोजेनिक सिद्धान्तको परीक्षण"। अपराधशास्त्र। ५३ (१): ५४–७३। doi:2015/53-1।
 बेली एए, हर्ड पीएल (मार्च २००५)। "औँलाको लम्बाई अनुपात (3D:2005D) पुरुषहरूमा शारीरिक आक्रामकतासँग सम्बन्धित छ तर महिलाहरूमा होइन।" जैविक मनोविज्ञान। ६८ (३): २१५–२२। doi:2/j.biopsycho.4।
 Meinhardt U, Mullis PE (अगस्ट 4)। "Aromatase/p2002arom को आवश्यक भूमिका"। प्रजनन चिकित्सा मा सेमिनार। २० (३): २७७–८४। doi:450/s-20-3। PMID 277।
 वाटरम्यान एमआर, कीनी डीएस (१९९२)। "एन्ड्रोजन बायोसिन्थेसिस र पुरुष फेनोटाइपमा संलग्न जीनहरू"। हर्मोन अनुसन्धान। ३८ (५–६): २१७–२१।
 डे लुफ ए (अक्टोबर २००६)। Ecdysteroids: कीराहरूको बेवास्ता गरिएको यौन स्टेरोइडहरू? पुरुषहरू: कालो बक्स।" कीट विज्ञान। १३ (५): ३२५–३३८। doi:6/j.2006-13.x S5CID 325।
 Guerriero G (7)। "भेर्टेब्रेट सेक्स स्टेरोइड रिसेप्टर्स: इभोलुसन, लिगान्ड्स, र न्यूरोडिस्ट्रिब्युसन"। न्यु योर्क एकेडेमी अफ साइन्सेज को इतिहास। ११६३ (१): १५४–६८।
AASraw सुरक्षित ढुवानी संग शीर्ष गुणस्तर उत्पादनहरु प्रदान। छिट्टै हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वागत छ!